Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0412 zom
Zoma 26 Okt.
Vakio “Amintsika Andriamanitra”, - IFM, tt. 9-18; “Salvation,” Ivan T. Blazen, tt. 271–313, ao amin’ny HSDAT, Raoul Dederen.
“Ny drafi-panavotana antsika, dia tsy vahaolana vao novolavolaina tatỳ aorian’ny fahalavoan’i Adama. Fanambarana ny “zava-miafina izay voaafina hatry ny fony fahagola” (Rôm. 16:25) izany. Izany dia fampiharihariana ireo fitsipika iorenan’ny seza fiandrianan’ Andriamanitra efa hatrizay hatrizay fony fahagola (...) Tsy baiko avy amin’Andriamanitra ny hisian’ny ota saingy efa hitany mialoha kosa izany ka nandraisany fepetra manokana hiatrehana io loza mahatsiravina io. Lehibe dia lehibe tokoa ny fitiavany an’izao tontolo izao, ka nafoiny mihitsy ny Zananilahy Tokana ‘mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay.’” - GAG, t. 23.
1. Eritrereto ny maha-ratsy dia ratsy ny ota ka tsy maintsy nilàna ny fahafatesan’ny Mpamorona mihitsy ho famahana ny olana. Manambara inona amintsika ny Hazo fijaliana mikasika ny tsy fahafahan’ny taranak’olombelona mamonjy ny tenany velively? Mety hisy ny azontsika anampiana io zavatra efa natao ho antsika io?
2. Misy olona sasany mino fa ny olona ihany dia efa ampy hanao fanavotana ny tenany, izany hoe tsy mampiova ny momba antsika eo anatrehan’Andriamanitra ny Hazo fijaliana. Ny tena hevitry ny Hazo fijaliana hoy izy ireo dia fanovana fotsiny ihany ny fomba fisainantsika mikasika an’Andriamanitra. Inona no maha-fahadisoan-kevitra mampalahelo ny foto-kevitra ara-pivavahana tahaka io? Inona no ambaran’izany mikasika ny olan’ny ota raha tsy misy afa-tsy ny “fanitsiantsika ny fomba fisainantsika” no hamaha ny olana?
3. Mety ve ny hananana fahalalana betsaka mikasika ny famonjena kanefa tsy manandrana izany akory? Inona no hevitrao mikasika ny tenin’i Ellen White manao hoe: “Ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra dia zavatra iainana sy hampiharina mihitsy; tsy fampianarana resahina fotsiny izany fa fitsipika voatenona eo amin’ny fanandramantsika rehetra mihitsy.”? –OHC, t. 243. Ahoana no fomba iainantsika ny famonjena isan’andro sy eo amin’ny zavatra rehetra ataontsika?
4. Diniho misimisy kokoa ny anjara asan’ny famonjena eo amin’ny tontolon-kevitry ny fifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara. Inona no antony hisarihan’i Satana olona maro araka izay tratrany tsy hahazo ny famonjena ao amin’i Jesôsy? Inona avy ireo fomba ampiasainy amin’izany, ary ahoana no fomba hiarovantsika ny tenantsika?